नाच हेर्ने क्रममा केही युवकबीच झ,ग,डा पछि इनारभित्र भेटियो एक युवकको श,व! – Taja Khawar
नाच हेर्ने क्रममा केही युवकबीच झ,ग,डा पछि इनारभित्र भेटियो एक युवकको श,व!
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ३१, २०७८ समय: १४:०६:०८
सिरहामा इना,रभित्र एक युवक मृ,xत फेला परेका छन् । जिल्लाको नरहा गाउँपालिका ३ स्थित इनारमा गोलबजार नगरपालिका ८ बस्ने २० वर्षीय शत्रुधन महतो शनिबार बिहान मृ,xत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महतोलाई इनारमा डु,बे,को अवस्थामा देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घ,टनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले युवकको श,,व निकालेर पोष्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी निरीक्षक अवधकिशोर ओझाले जानकारी दिए ।
स्थानीयका अनुसार युवक नरहामै आयोजित झिझिया नाच हेर्न शुक्रबार राति गएका थिए । नाच हेर्ने क्रममा केही युवकबीच झ,ग,डा भएको थियो ।
झ,ग,डा र महतोको मृ,x त्युको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
Last Updated on: October 17th, 2021 at 2:06 pm